Maraykanka oo halis ugu jira xasarad siyaasadeed & Trump oo damacsan arrin dhib wayn horseedi kara. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Maraykanka oo halis ugu jira xasarad siyaasadeed & Trump oo damacsan arrin...
Maraykanka oo halis ugu jira xasarad siyaasadeed & Trump oo damacsan arrin dhib wayn horseedi kara.
Walwaal Online; (Washington, DC) 11 Nof 2020 – MW Donald Trump ayaa hore u diidey inuu aqbali doono in laga guulaystey, waxaana arintaa ku taageeray xisbigiisa Jamhuuriga ee Washington, balse waxay arrintu ka sii dartay ka dib markii uu Wasiir Dibadeedkiisii dalkaasi ee Mike Pompeo uu sheegay inay ”xilka ula wareegayaan si nabdoon”, isagoo hadalkiisa u dhigay in Trump guulaystey-
Ninkan oo ka mid ah ragga yar ee daacadda u ah Trump, ayaa warfidiyeenadu ay waydiiyeen sababta ay uga lug jiidayaan inay natiijada aqbalaan? isagoo su’aashaa si ka yaabisay kaga jawaabey taas oo ah inay xilka ula wareegayaan si ”aan dhib lahayn.”
Trump oo ku doodaya in doorashada lagu shubtay wax cadayn ahna keenin, ayaa xitaa eryey Wasiirkii Gaashaandhigga Mark Esper, isagoo Pentagon-ka gaystey rag isaga u daacad ah, si ciidamada Maraykanka loogu adeegsado haddii ay dibed baxyo dhacaan, iyadoo ay taasi adkaan doontoahayna wax sidaa u sahlan. Waxaa sidoo kale meelaha qaar iskugu soo baxay taageerayaashiisa oo hubaysan.
Biden oo xalay la waydiiyey sida uu u arko inuu ”tallaabo sharci ah qaado” iyo dhibka ka haysta inuu bilaabo howlaha la wareegista xilka oo loo dhaarinayo 20-ka Jannaayo, ayaa yaraystay arrinta isagoo sheegay in ay durba wadaan la wareegista howsha, isla markaana aanay daruuri ahayn tallaabo sharci ah, tiiyoo uu diidmada Trump uu ku tilmaamay “mid laga yaxyaxo.”
Yeelkeede, codad la qaaday ayaa muujinaya in ku dhowaad 80% dadka Maraykanka oo ay ku jiraan kala badh Jamhuuri ahi ay qabaan in Biden uu ku guulaystey doorashadii 3-dii Nof., sida ku cad codayn ay sameeyeen Reuters/Ipsos.
Mairia Trump oo la dhalatay MW Trump, isla markaana qortay buug ay cinwaan uga dhigtay ”sida uu qoyskeennu us oo saaray ninka caalamka ugu khatarsan”, ayaa sheegtay in ninkani aanu ogolayn qof baa kaa raayey oo haddii laga guulaysto uu ku dadaali doono in lala wada dhaco sidiisa.
Previous articleMaxaa ka jira in ciidamo ka socda Eritrea ay ku biireen dagaalka ka socda gobolka Tigray?
Next articleDadka ka soo kabta cudurka Covid-19 oo la sheegay inay u nuglaadaan cudurro dhanka dhimirka ah (Daraasad)
Maxaa ka soo baxay kulankii M/weyne Deni & James Swan iyo hal arrin oo lagu canaantay Puntland
Puntland waxay la wareegtey awooddii ciidan ee Sanaag bari, xilka riixidii dhoobo & awoodda wasiir Jamaal oo weli taagan.